धैर्यकान्त दत्त काठमाडाैं - शनिबार, फागुन १५, २०७७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनःस्थापनाको फैसला सुनायो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासको सर्वसम्मत फैसला थियो त्यो। निर्णय सुनाउँदा न्यायाधीशहरूको मत बाझिनसक्ने आँकलन भइरहेको थियो। तर, त्यसो भएन।
र, दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म चलेको बहसपछि सबै न्यायाधीश प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाकै पक्षमा उभिए।
विघटनपछि मुलुकमा उत्पन्न राजनैतिक शून्यतालाई सर्वोच्चको फैसलाले अन्त्य गरिदिएको सबैले महसुस गरे। फागुन १२ गतेको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्न चितवन पुगेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले एकअर्कालाई लड्डु खुवाएर खुसी साटासाट गरे।
चितवनको विरोधसभा विजयसभाको रूपमा मनाइने उद्घोष प्रचण्ड र नेपालले गरे । यद्यपि, चितवनको सभालाई सम्बोधन नगरी दुवै नेता फागुन १२ गते बिहानै काठमाडौं हान्निए।
त्यही दिन प्रचण्ड–माधव समूहले काठमाडौंमा विजय जुलुस निकाल्यो। जुलुसपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गरेकी प्रचण्ड–माधव समूहकी नेतृ पम्फा भुसालले ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए १३ दिनपछि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकले हटाउने छ। संविधानको हत्या गर्ने, संविधानको संरक्षण गर्न नसक्नेले चाँडै ठाउँ खाली गरुन्’ भनेकी थिइन्।
भुसालले भनेजस्तो सर्वोच्चको फैसला आएको पाँच दिन बितिसक्दासम्म प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका छैनन्। र, उनले राजीनामा नदिने प्रष्ट संकेतपनि दिइसकेका छन्।
ओलीले चालेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै पुनःस्थापना गरिदिएपछि राजनीतिक ‘कोर्स’ नयाँ दिशामा प्रवेश त गर्‍यो। तर, मुलुक तुरन्तै स्थिरताको दिशामा जानसक्ने सम्भावना भने न्यून देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिएर सम्मानजनक बर्हिगमनको पक्षमा देखिएका छैनन्। बरू संसद ‘फेस’ गर्ने तर राजीनामा नदिने उनी निकटस्थ नेताहरूको भनाइबाट ओली सरकारको नेतृत्व छोड्ने मनस्थितिमा नरहेको प्रष्ट हुन्छ।
वैधानिक रूपले फुटिनसकेको नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूह भने ओलीलाई पदच्युत गरेर नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा जुटिसकेको छ।
तर प्रचण्ड–माधव समूहले भने अनुसार सरल र सहज ढंगबाट मुलुकले नयाँ सरकार पाउन सम्भवाना भने पक्कै छैन। नयाँ सरकार गठनका लागि विभिन्न खाले संवैधानिक र कानुनी जटिलता सामुन्ने आएका छन्। ती जटिलताका कारण नेपाली राजनीति अझै केही दिन संकटको भुमरीमा फस्ने लगभग पक्का छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको विरोधमा सवै भन्दा बढी सडकमा देखिए प्रचण्ड–माधव समूहको नेकपा । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएपनि सरकार गठनका लागि अहिले ठूलो गाँठो बनेको छ, उही नेकपाको आधिकारिकता विवाद।
भावी सत्ता समीकरणका लागि दौडधुप गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाललाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘तपाईंहरूले पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंगो नलगाएसम्म कसरी सहकार्य गर्ने?’प्रश्न गरेका थिए।
कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले पनि सत्ता सहकार्यका लागि परिपक्व स्थिति अहिले नबनेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ। उसको प्रष्ट संकेत नेकपा आधिकारिकता विवादतर्फ छ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सहकार्यका लागि जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि सहयोग मागेका छन्। नेकपा पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा भएको भेटका क्रममा जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि ‘तपाईंहरूको पार्टी कुन हो?’ प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए।
समकालीन राजनीतिमा ओली चतुर खेलाडी मानिन्छन्। यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको इतिहास छ।
तर, ओलीले यसो गरेनन्। प्रतिनिसधभा विघटन गरेपनि सर्वोच्चले पुनःस्थापना गर्न सक्ने आशंका सम्भवतः ओलीलाई थियो। त्यसैले सर्वोच्चको फैसला आउन तीन चार दिनअघि उनको बोली पनि फेरिएको थियो।
र, पुनःस्थापना भइदिएपनि के हुन्छ? भन्ने गरेका थिए ओलीले ।
राजीनामा नदिएकाले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन प्रचण्ड–माधव समूहसँग अब दुई विकल्पमात्र छ। पहिलो ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र दोस्रो प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पारित गराउने।
नेकपा व्यवहारिक रूपले फुटिसके पनि कानुनी ढंगबाट अझै फुटेको छैन। कानुनी रूपले नफुटेका कारण संसदीय दलका नेता अझै ओली नै छन्।
ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउन संसदीय दलको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। र, बैठक दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ्गले आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। दलका उपनेताले आह्वान नगरेको अवस्थामा नेकपा विधानअनुसार एक चौथाई सदस्यले बैठकको माग राख्दै निवेदन दिन पाउने छन्।
संविधानको धारा ७६ (१) ले सवैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ दलका नेता उपनेताले बैठक नबोलाएको अवस्थामा एक चौथाइ सदस्यले माग गरे दलका नेता बैठक बोलाउन बाध्य हुने बताउँछन्।
हुन त प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दुई दिनपछि प्रचण्ड–माधव समूहले संसदीय दलको बैठक बसेर ओलीलाई नेताबाट निष्कासन गरेर प्रचण्डलाई नेता बनाउने निर्णय गरेको थियो।
वैधानिक रूपले नेकपा विभाजन भइनसकेकोले त्यो निर्णय मान्य हुने सम्भावना नरहेको अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ।
आफैंले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गरिसकेको नेकपा–प्रचण्डलाई पूरानै प्रक्रियामा फर्कन चुनौती थपिएको छ।
संसदीय दलको नयाँ नेता चयन नगरेर प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोझै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने अर्को विकल्प प्रचण्ड–माधव समूहसँग छ।
तर, आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मिल्ने वा नमिल्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
तर, यसका लागि पार्टी विभाजन नै हुनुपर्ने आवश्यकता नरहेको अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने भनेर संविधानले कहीँकतै व्यवस्था गरेको छैन,’श्रेष्ठ भन्छन्,‘त्यसैले कुनै पनि दलले यस आधारमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्छ।’
पुष ५ गते प्रचण्ड–माधव समूहले प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावलाई आधार मानेर अघि बढ्न कुनै वाधा नआउने श्रेष्ठको दावी छ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनअगावै संसद सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो,’ आयोमेलसँग श्रेष्ठले भने,‘प्रतिनिधिसभा रहेकै बेला दर्ता भएकोले त्यो अविश्वास प्रस्ताव अझै जीवितै छ।’
नयाँ सरकार गठनका लागि संसदीय दलका नेता परिवर्तन वा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर अघि बढ्नसक्ने दुई विकल्प रहे पनि प्रचण्ड–माधव समूहले कुन बाटो समाउला भन्न नसकिने श्रेष्ठले बताए।
तर, प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन प्रचण्ड–माधव समूह एक्लैका सांसद संख्या पर्याप्त छैनन्। यसका लागि कांग्रेस र जसपाको सहयोग चाहिन्छ।
कांग्रेस र जसपाले पार्टी स्पष्ट पार्न प्रचण्ड–माधव समूहलाई सन्देश दिइसकेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनसक्ने छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रायःजसो सवै सभाहरूमा आफू ६४ प्रतिशत प्रतिनिधिसभा सदस्यको बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री रहेको भन्दै आएका थिए। ६४ प्रतिशतको समर्थन आफूतिर रहेकोले बाँकी ३६ प्रतिशतबाट नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नहुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनले तर्क दिइरहे।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई उल्टाइ दिएको छ। सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदैमा मेरो राजनीति सकिँदैन’ बताएका थिए।
६४ प्रतिशत बहुमत आफूसँग रहेको दावी गर्दै आइरहेका ओलीले अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिनसक्ने छन्।
संविधानको धारा १०० (१) ले प्रधानमन्त्रीका लागि यो मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासका मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ’ संविधानको धारा १०० (१) मा भनिएको छ।
चारैतर्फ राजीनामाको माग भइरहेको बेला संसदलाई आफूमाथि विश्वास रहेको जाँच गराउने सुविधा प्रधानमन्त्री ओलीसँग छ। उनले यसको उपयोग गर्न सक्नेछन्।
प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामा प्रश्न
अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिको इतिहासमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रायः सवै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेका छन्।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगर्दा नयाँ सरकार गठनका लागि जटिलता देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै प्रधानमन्त्रीको स्वतःराजीनामा हुन्छ उनको जिकिर छ।
‘जहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन्छ त्यो स्वतः राजीनामा हुन्छ। किनभने प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै नरहेपछि प्रधानमन्त्री कसरी रह्ने?’ श्रेष्ठ भन्छन्,‘हरेक ठाउँमा संविधान मिचिएको छ। मिच्दा मिच्दा यहाँसम्म आइपुगेको हो।’
प्रधानमन्त्रीमा राजनैतिक र संवैधानिक नैतिकताको कमी भएकोले अहिले जटिलता देखिएको उनको भनाइ छ।
‘आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चले ब्युँताइ दिएको छ,’ उनले भने,‘अब त्यही प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कसरी जाने? ओलीजीले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? उहाँले त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिनु पर्थ्याे।’
अहिले देखिएको जटिलता अन्त्य गर्न कांग्रेसले खेलिरहेको भूमिका पनि सन्तोषजनक नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई लागेको छ।
‘जनताले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएको कुरा ठीकै हो,’ उनी भन्छन्,‘यत्रो लडाइँ लडेर आएको पार्टी अहिले सत्तामै नगए पनि सरकार बनाउन निकास दिन जरुरी छ।’
सरकारमा जाने नजाने कुरा तपसीलका विषय भए पनि कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले संविधान जोगाउनतर्फ चनाखो हुन आवश्यक रहेको श्रेष्ठले बताए।